Saraakiisha CXD oo ka hadlay howlgallo ka dhacay Sh/Dhexe | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Saraakiisha CXD oo ka hadlay howlgallo ka dhacay Sh/Dhexe
Saraakiisha CXD oo ka hadlay howlgallo ka dhacay Sh/Dhexe
Taliyaha Qeybta 27-aad ee Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Generall Maxamuud Maxamed Koronto ayaa faah faahin ka bixiyay howlgallo ay ciidamada ka fuliyeen inta u dhexeysa Jowhar iyo Balcad.
Taliyaha qeybta 27-aad ee ciidanka Xoogga dalka ayaa sheegay in maalmahan ay jireen carqaladen ay sameynayeen Al-Shabaab oo gaadiidka isticmaala Jowhar iyo Balcad ay jidka u galeen, balse howlgallo ay ciidamada halkasi ka fuliyeen khasaare lagu gaarsiiyay Al-Shabaab, isla markaana ciidan xoog leh la dhigay waddadasi.
General Maxamuud Maxamed Koronto ayaa beeniyay warar been abuur ah oo lagu baahiyay baraha bulshada, kaasi oo sheegayay in Al-Shabaab ay qabsadeen tuulooyin hoostaga Jowhar, waxaana uu intaa ku daray in ciidamada ay markasta diyaar u yihiin inay shacabka ka dulqaadaan cadowga.
Ciidanka Xoogga Dalka oo kaashanaya Ciidamada Maamulka Hirshabeelle, ayaa shalay qaaday guluf ay ku doonayan inay isugu furaan wadada xiriirisa Degmooyinka Balcad & Jowhar ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, ka dib markii ay Shabaabku ku soo xoogeysteen.
Ciidamada gulufkan qaaday oo uu horkacayo Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabeelle, Cali C/laahi Xuseen (Cali Guudlaawe), ayaa bilaa dagaal kula wareegay Degaanka Ceelka Geelow. Shabaabka ayaa isaga baxay halkaasi, markii ay ka war helayn gulufka xoogan ee ku soo wajahan.